VOKA EGO! URlọ akwụkwọ EUROPEAN VOTE LABEL - Gaa! ECTlọ akwụkwọ
Na mmekota na
IKWU ANYAIN NA-AKOZI ANYA!
Gaba! ECTlọ akwụkwọ gụpụtara akwụkwọ gbasara EUROPEAN VOTED LABEL FIRST 4 na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ
Otu afọ gara aga, ụlọ akwụkwọ sekọndrị ise sitere na Antwerp na Waasland sonyere na pilot pilot IN2STEM nke Voka - Chamber of Commerce Antwerp-Waasland. Site na usoro nkuzi nke ụlọ ahụ na nkwado nke nnukwu ụlọ ọrụ iri abụọ na otu, ụlọ akwụkwọ ise ahụ bụ ndị mbụ na Belgium iji nweta akara ụlọ akwụkwọ EU STEM. Ndị a bụ GO Atheneum na Stedelijk Lyceum Campus Hardenvoort si Antwerp, ndị Deurnese GO! Lọ akwụkwọ dị iche iche, Don Bosco si Hoboken na ụlọ akwụkwọ nwanne nwanne Hiëronymus si Stekene. N'ihi ihe ndị a na-eme na corona, ha nabatara onyinye ha site na vidiyo site na vidiyo taa.
Ebumnuche IN2STEM bụ iji hụ na nnukwu profaịlụ profaịlụ dị elu na ụlọ ọrụ ahụ. 'Ọ bụ ụlọ ọrụ iri abụọ na otu nke ụlọ ọrụ Platform anyị ebutela ụzọ maka ọrụ a', ka Luc Luwel, onye isi njikwa Voka-Chamber of Commerce Antwerp-Waasland na-akọwa. Thelọ ọrụ dị na mpaghara Antwerp-Waasland bụ otu n'ime ụwa kachasị mma na azụmaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Iji kwado ọnọdụ ahụ, ha ga-enwerịrị ike ịdọrọ na nnukwu ọdọ mmiri nke teknụzụ kacha elu. Mana maka nke ahụ, ịchọrọ izizi STEM nke ọkwa mba ụwa kachasị elu. Ha enweghị nkwa ahụ. '
Gaba! Lọ akwụkwọ na-atụkarị anya na nke a ga-eme ka ihe osise nke teknụzụ pụta. 'Anyị kwenyere na ọ dị mkpa na ọdịnihu nke agụmakwụkwọ aka ọrụ, maka ọmụmụ ihe ndị metụtara ọrụ na usoro agụmakwụkwọ na-eduga agụmakwụkwọ ka elu. Anyị na-atụ anya ka elebara anya maka nke a site na akara aha STEM a. Anyị kwenyesiri ike karịa ka anyị na-etinye ego na akụrụngwa anyị, 'onye nduzi bụ Christine Hannes na-ekwu.
Gụọ ebe a mbipụta na VOKA magazine “Ondernemers” nke June 2020